အမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး ကရာတေးပြိုင်ပွာမှာ နိုင်ငံအတွက် ရွှေတံဆိပ်တွေ ကိုယ်စီယူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ ၇ နှစ် နှင့် ၈ နှစ်အရွယ် ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေး – CharTake
chartake | November 23, 2019 | Cele News, Local News, Sport News | No Comments
အမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး ကရာတေးပြိုင်ပွာမှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ရွှေတံဆိပ်တွေ ကိုယ်စီယူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ ၇ နှစ် နှင့် ၈ နှစ်အရွယ် ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေး
လက်တွေ့လောကကြီးမှာ မလျှော့သောဇွဲလုံ့လနဲ့ ဘဝကို ကြိုးစားရပ်တည်နေသူတွေ လောကမှာ အများကြီး ရှိပါတယ်…. ဒီလိုကြိုးစားရင်း မိမိအောင်မြင်မှုသာမက နိုင်ငံ့ရဲ့ ဂုဏ်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သူတွေဆိုရင် အရမ်းကို လေးစားချီးကျူးဖို့ ကောင်းမှာပါ…. ခုပြောပြချင်တာကလည်း အသက်အားဖြင့် ငယ်ရွယ်သေးပေမဲ့ ကိုယ့်ဒူးကိုယ်ချွန် ကြိုးစားပြီး မြန်မာ့ဂုဏ်ကို ဆောင်ခဲ့တဲ့ ကလေးလေး ၂ ယောက်အကြောင်းကိုပါ။ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့မှာ ကျင်းပနေတဲ့ ၁၂ ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာ့ကရာတေးပြိုင်ပွဲ (12th World Open Karate Championship) မှာ မြန်မာနိုင်ငံက ကလေး ၂ ဦးဖြစ်တဲ့ ညီလေး ဂျာလ(JA LA) နဲ့ ညီမငယ်လေး ဆန့်မိုင်နူး(Seng Mai Nu)တို့ ဟာ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဆု ရွှေတံဆိပ်ကို ဆွတ်ခူးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်…ညီလေး ဂျာလ(JA LA) ဟာ အသက် ၈ နှစ်တန်းပြိုင်ပွဲမှာ ရွှေတံဆိပ်ဆုကို ရယူပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ညီမငယ်လေး ဆန့်မိုင်နူး(Seng Mai Nu) က အမျိုးသမီးသက်ငယ် ၇ နှစ် တန်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ရွှေတံဆိပ်ဆုကြီးကိုရယူပေးလိုက်နိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်….ရွှေတံဆိပ်ယူပြီး နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ ကလေး ၂ ဦးဟာ ဆရာကြီးဦးမင်းလွင် ဦးဆောင်တဲ့ IKO Myanmar Team ကဖြစ်ပြီးတော့ သူတို့ ၂ ဦးဟာ မြန်မာ့ကရာတေးသမိုင်းမှာ ကမ္ဘာ့ပြိုင်ပွဲ အဆင့်တွေမှာ ပထမဦးဆုံး ရွှေတံဆိပ်တွေကို ရယူပေးနိုင်ခဲ့သူတွေပဲ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အရမ်း အရမ်းကိုတော်ကြတဲ့ကလေးတွေပါ မြန်မာ့အားကစား ကမ္ဘာကို လွှမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ စကားကို သူတို့ရဲ့ ကြိုးစားမှု၊ အားထုတ်မှုနဲ့ ပေးဆပ်မှုတွေနဲ့ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့ပြီလို့ ဆိုရမှာပါ…
ဒါ့အပြင် အဲဒီပြိုင်ပွဲမှာ နောက်ထပ် မြန်မာကိုယ်စားပြု ညီလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဆန့်လက်အောင်(SENG LAT AUNG) ကလည်း အသက် ၇ နှစ်တန်းမှာ ဒုတိယ ငွေတံဆိပ်ဆုကို ရယူပေးပြီး မြန်မာ့ဂုဏ်ကို ဆောင်နိုင်ပေးခဲ့ပါတယ်…မြန်မာအနေဖြင့် ကမ္ဘာ့အဆင့်ပြိုင်ပွဲမှာ ရွှေတံဆိပ်ဆုတွေ ငွေတံဆိပ်ဆုတွေရယူပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ပထမဦးဆုံး အကြိမ်ပဲဖြစ်ပါတယ်… မြန်မာ့ကရာတေးသမိုင်းနဲ့ မြန်မာတို့ရဲ့ ဂုဏ်ကို ကမ္ဘာမှာမြှင့်တင်ပေးခဲ့တဲ့ အသက်ငယ်ပေမဲ့ လေးစားရတဲ့ ညီလေး ညီမလေးတွေမို့ ခုလို သတင်းလေးပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ရတာပါ…ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း ဂုဏ်ပြုစကားလေးတွေကို ညီလေးညီမလေးတို့အတွက် ပြောခဲ့ပါအုံးနော် Writer – HW (Shwe Yaung Lan)
Source : International Karate Organization – Myanmar Branch တို့အား လေးစားစွာ ခရက်ဒစ်ပေးပါတယ် ခင်ဗျာ။ မြန်မာ့အားကစား ကမ္ဘာလွှမ်းဖို့ နီးစပ်လာပြီလားလို့ တွေးထင်ရင်း UNICODE ကမ်ဘာ့အမွငျ့ဆုံး ကရာတေး ခနျြပီယံ ပွိုငျပှဲကွီးမှာ ဆုရသှားတဲ့ မွနျမာ ကလေးငယျ နှဈဦး(တဖွညျးဖွညျးနဲ့ ပနျးတိုငျနီးလာပါပွီ)
လကျတှလေ့ောကကွီးမှာ မလြှော့သောဇှဲလုံ့လနဲ့ ဘဝကို ကွိုးစားရပျတညျနသေူတှေ လောကမှာ အမြားကွီး ရှိပါတယျ…. ဒီလိုကွိုးစားရငျး မိမိအောငျမွငျမှုသာမက နိုငျငံ့ရဲ့ ဂုဏျကို မွှငျ့တငျပေးနိုငျသူတှဆေိုရငျ အရမျးကို လေးစားခြီးကြူးဖို့ ကောငျးမှာပါ…. ခုပွောပွခငျြတာကလညျး အသကျအားဖွငျ့ ငယျရှယျသေးပမေဲ့ ကိုယျ့ဒူးကိုယျခြှနျ ကွိုးစားပွီး မွနျမာ့ဂုဏျကို ဆောငျခဲ့တဲ့ ကလေးလေး ၂ ယောကျအကွောငျးကိုပါ။ဂပြနျနိုငျငံ တိုကြိုမွို့မှာ ကငျြးပနတေဲ့ ၁၂ ကွိမျမွောကျ ကမ်ဘာ့ကရာတေးပွိုငျပှဲ (12th World Open Karate Championship) မှာ မွနျမာနိုငျငံက ကလေး ၂ ဦးဖွဈတဲ့ ညီလေး ဂြာလ(JA LA) နဲ့ ညီမငယျလေး ဆနျ့မိုငျနူး(Seng Mai Nu)တို့ ဟာ ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံဆု ရှတေံဆိပျကို ဆှတျခူးပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ…ညီလေး ဂြာလ(JA LA) ဟာ အသကျ ၈ နှဈတနျးပွိုငျပှဲမှာ ရှတေံဆိပျဆုကို ရယူပေးနိုငျခဲ့တာဖွဈပွီး ညီမငယျလေး ဆနျ့မိုငျနူး(Seng Mai Nu) က အမြိုးသမီးသကျငယျ ၇ နှဈ တနျးမှာ မွနျမာနိုငျငံအတှကျ ရှတေံဆိပျဆုကွီးကိုရယူပေးလိုကျနိုငျတာပဲ ဖွဈပါတယျ….ရှတေံဆိပျယူပွီး နိုငျငံ့ဂုဏျဆောငျနိုငျခဲ့ ကလေး ၂ ဦးဟာ ဆရာကွီးဦးမငျးလှငျ ဦးဆောငျတဲ့ IKO Myanmar Team ကဖွဈပွီးတော့ သူတို့ ၂ ဦးဟာ မွနျမာ့ကရာတေးသမိုငျးမှာ ကမ်ဘာ့ပွိုငျပှဲ အဆငျ့တှမှော ပထမဦးဆုံး ရှတေံဆိပျတှကေို ရယူပေးနိုငျခဲ့သူတှပေဲ ဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
အရမျး အရမျးကိုတျောကွတဲ့ကလေးတှပေါ မွနျမာ့အားကစား ကမ်ဘာကို လှမျးရမယျဆိုတဲ့ စကားကို သူတို့ရဲ့ ကွိုးစားမှု၊ အားထုတျမှုနဲ့ ပေးဆပျမှုတှနေဲ့ ဖွညျ့ဆညျးပေးနိုငျခဲ့ပွီလို့ ဆိုရမှာပါ…ဒါ့အပွငျ အဲဒီပွိုငျပှဲမှာ နောကျထပျ မွနျမာကိုယျစားပွု ညီလေးတဈယောကျဖွဈတဲ့ ဆနျ့လကျအောငျ(SENG LAT AUNG) ကလညျး အသကျ ၇ နှဈတနျးမှာ ဒုတိယ ငှတေံဆိပျဆုကို ရယူပေးပွီး မွနျမာ့ဂုဏျကို ဆောငျနိုငျပေးခဲ့ပါတယျ…
မွနျမာအနဖွေငျ့ ကမ်ဘာ့အဆငျ့ပွိုငျပှဲမှာ ရှတေံဆိပျဆုတှေ ငှတေံဆိပျဆုတှရေယူပေးနိုငျခဲ့တဲ့ ပထမဦးဆုံး အကွိမျပဲဖွဈပါတယျ… မွနျမာ့ကရာတေးသမိုငျးနဲ့ မွနျမာတို့ရဲ့ ဂုဏျကို ကမ်ဘာမှာမွှငျ့တငျပေးခဲ့တဲ့ အသကျငယျပမေဲ့ လေးစားရတဲ့ ညီလေး ညီမလေးတှမေို့ ခုလို သတငျးလေးပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျရတာပါ…ပရိသတျကွီးတို့လညျး ဂုဏျပွုစကားလေးတှကေို ညီလေးညီမလေးတို့အတှကျ ပွောခဲ့ပါအုံးနျော Writer – HW (Shwe Yaung Lan) Source : International Karate Organization – Myanmar Branch တို့အား လေးစားစှာ ခရကျဒဈပေးပါတယျ ခငျဗြာ။ မွနျမာ့အားကစား ကမ်ဘာလှမျးဖို့ နီးစပျလာပွီလားလို့ တှေးထငျရငျး
Tags:cele news, local news, Sport news
ဗန်မော်နယ်က ကျေးရွာမှာ တာဝန်ကျတဲ့ ဆရာမလေးတွေရဲ့ အဆောင်ကို ဖောက်ထွင်းပြီး ယုတ်မာသွားတဲ့လုပ်ရပ် ရုပ်သံ
မြန်မာပြည်တွင် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထုတ်လုပ်မည့်ကိစ္စ အစိုးရမှ ခွင့်မပြုဟုသိရ
အရှိန်ဖြင့် မောင်းနှင်လာသော ကားတစ်စီးက ကိုရင်လေး တစ်ပါးကိုတိုက်ပြီး မောင်းပြေးသဖြင့် ပျံလွန်တော်မူသွား(ကနဦးသတင်း)